Vaovao Mahafa-po No 5 Winter 2018 | Ny valin'ny Fanamarinana
Home Tsia 5 Winter 2018
Amin'ny alàlan'ny Saferaly Saferaly amin'ny Talata 6th Mampahatsiahy kely ny antony tokony ilaintsika eo amin'ny rantsan-tongony momba ny voka-dratsy mety hitranga eto amin'ny Internet, indrindra ny ankizy, ny volana Febroary. Amin'ity fanontana ririnina ity dia miresaka vaovao momba ny isika - maodelim-pandraharahana vaovao an'ny indostrian'ny pôrnôgrafia hanomboka 'mandoa' olona hijerena pôrnôgrafia; ny sokajy diagnostika vaovao naroson'ny 'fikorontanan-tena amin'ny firaisana ara-nofo maharikoriko' nataon'ny World Health Organization; fanandramana ataon'ny indostrian'ny pôrnôgrafia hiala amin'izany; fahafaha-manabe vaovao mitondra CPD vaovao; sombim-baovao momba ny fomba fandraisan'ny firenena hafa fanolanana an-tserasera; fanampiana amin'ny fialana ary fisehoana manokana amin'ny Andron'ny Mpifankatia hampifaly ny fonay.
Ho an'ny vaovao farany isan'andro, araho ny Twitter @brain_love_sex ary jereo ny bilaoginay isan-kerinandro ao amin'ny pejy fandraisana. Contact mary@rewardfoundation.org raha te-hanana lohahevitra ao anatin'ny faritra misy antsika ve ianao.
Ireo mpampiasa no mijery ny Hardcore Porn
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana omena ho fampiroboroboana ny fihenan-tsasatra ara-pahasalamana vaovao
Fitadiavam-bahaolana momba ny fampiroboroboana ny porn ho an'ny fahasamihafana Diagnosis vaovao
Herisetra ara-nofo eo amin'ny toeram-piasana
Voalohany ho an'ny fitsarana: nivadika am-polony noho ny fanolanana ankizy an-tserasera
"Inona no tokony hataoko? Ireo Dilemma mitatitra ny zatovovavy amin'ny sarimihetsika ngeza "Fikarohana vaovao
Mampianatra ny atrikasa nomerika RCGP voalohany amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana amin'ny volana Mey
Fanampiana avy amin'ny ekipa NoFap ho famahana ny taona vaovao
Mampianatra any an-tsekoly - Commentaires amin'ny mpianatra
Ahoana no hanatsarana ny andron'ny mpifankatia
Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia nampiasaina handoa vola roa ary sarotra ny miditra. Avy eo dia nanjary maimaimpoana sy niely be tao amin'ny smartphones sy fitaovana amin'ny aterineto hafa. Ny vaovao tamin'ity herinandro ity dia ireo mpilalao lehibe ao amin'ny indostrian'ny pôrnilibiby dolara dia manangona ny lalao mba 'handoavana' ny olona hijery porno mafy, na dia ao amin'ny crypto-currency aza. Ity ny tantara tantanan'i Ny Sunday Times (4 Feb 2018) izay nanonona anay. Tany am-boalohany dia notondroin'ny mpanao gazety hoe 'fampielezankevitra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet' izahay saingy novaina ho “manohitra ny pôrnôgrafia amin'ny Internet”, heverin'ny sub-editors. Fehiny: mbola betsaka ny vola ho an'ny indostrian'ny pôrnôgrafia efa manankarena fa ny olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fiankinan-doha amin'ny NHS mitafy vola, heloka bevava ara-nofo bebe kokoa noho ny rafi-pitsarana heloka bevava be loatra ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra, tsy faniriana firy ny tena fifandraisana miaraka amin'ny ambany ny fahafaham-po amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny ankapobeny.
Ny WHO dia hamoaka ny boky fanoratana iraisam-pirenena iraisana iraika ambin'ny folo nohavaozina (ICD-11) amin'ny faran'ity taona ity. Izy io dia ampiasain'ny matihanina momba ny fahasalamana eran'izao tontolo izao hamantarana ireo karazana aretina rehetra. Ny Boky Diagnostika sy statistikan'ny aretina ara-pahasalamana ara-tsaina, izay ao anatin'ny fanombohana fahadimy (DSM 5, 2013), dia iray ihany izay nampiasaina voalohany indrindra tany Etazonia fa tsy dia fahita any ankoatry ny morony. Rehefa mihalehibe ny fikarohana momba ny faritra vaovao amin'ny aretina, dia misy fidirana vaovao miseho. Ho an'izany, sy ho fanekena ny fiatraikany amin'ny internet amin'ny fitondran-tena sy ny fahasalamana, dia vonona ny ICD-11 hampiditra sokajy maro karazana fikorontanana isan-karazany ao anatin'izany ny "fikorontanan'ny fitondran-tena mahery".
Taratasy World Psychiatry (Vol 17: 1 Feb 2018) avy amin'ireo mpandàla ny neuroscientista voakasika amin'ny fampiroboroboana ny boky vaovao, mamelabelatra ny fomba nahatongavan'ity aretina ity. Ity misy singa iray:
"Ny endrika dia miseho amin'ny iray na maromaro amin'ireto manaraka ireto: a) ny fanaovana firaisana ara-nofo miverimberina dia lasa lohahevitra lehibe amin'ny fiainan'ny olona ka tsy miraharaha ny fahasalamana sy ny fikarakarana manokana na tombontsoa hafa, asa aman-draharaha; b) ilay olona dia nanao ezaka maro tsy nahomby mba hifehezana na hanamaivanana ny fitondran-tena miverimberina; c) ny olona dia manohy manao fihetsika miverimberina na dia eo aza ny voka-dratsiny (ohatra, ny fihenan'ny fifandraisana miverimberina, ny vokatr'izany, ny fiantraikany amin'ny fahasalamana); na d) ny olona dia manohy manao fihetsika mamerina amin'ny laoniny na dia kely aza izy na tsy mahafa-po azy.
Ny fiahiahiana momba ny fihetsika ara-pananahana momba ny firaisana ara-nofo dia mazava ho azy ao amin'ny toro-làlana momba ny aretina natolotry ny aretina. Ny olona manana fari-pahaizana ambony sy fitondran-tena avo lenta (ohatra, noho ny fiaramanidin'ny firaisana ara-nofo) izay tsy misy fiantraikany amin'ny fitondran-tenany amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fahakiviana lehibe na ny tsy fahampian'ny fikarakarana dia tsy tokony ho voamarina amin'ny fikorontanan'ny firaisana ara-nofo. Tsy tokony asiana famaritana koa ny famaritana ny haavon'ny fahalianana sy ny fitondran-tena (ohatra ny masturbation) izay mahazatra eo anivon'ny tanora, na dia misy ifandraisany amin'ny fahantrana aza.
Ny torolàlana momba ny fitiliana diovina dia manantitrantitra koa fa ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo dia tsy tokony ho hita noho ny fahasarotana ara-tsaina mifandraika amin'ny fitsipi-pitondran-tena ara-moraly na ny tsy fankasitrahana ny fanasitranana ara-pananahana, ny fanentanana na ny fitondrantena izay raha tsy izany dia heverina ho fanondroana ny psikopatolojia. Ny fitondrantena mametaveta izay egodystonic dia mety miteraka fikorontanana ara-tsaina; Na izany aza, ny fahasarotana ara-tsaina vokatry ny fitondran-tena ara-piraisana irery dia tsy manome antoka ny aretina manelingelina ny firaisana ara-nofo. "
Ny indostrian'ny pôrnô dôlara miliara dolara dia mikendry ny hiaro ny tombom-barony ary ny fako mety hahatonga ny fampiasana sary vetaveta hahatonga azy ho masiaka. Raha jerena ny adihevitra momba ny Weinstein / Spacey, ny #MeToo sy ny tolo-kevitry ny ICD-11, ity lahatsoratra ity Daily Mail dia manandrana manaporofo fa ny fiankinan-dohan'ny firaisana ara-nofo sy ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia dia mety ho aretin'ny sainy.
Na izany aza, ny vondrona vehivavy miady amin'ny famaritana vaovao «Ny fitondran-tena mamoa fady» amin'ny fanontana vaovao an'ny World Health Organisation's Classification of Diseases (ICD-11) dia diso lalana tokoa. Tsy tokony hatahotra izy ireo. Ity diagnostika natolotra ity dia TSY "hamela ny Weinsteins hiala amin'ny farango." Ity dia teboka firesahana iray namboarin'ny milina fampahalalam-baovao mamoa fady hanandrana hampitombo ny fanoherana ny aretina voalaza.
Ity diagnostika ICD-11 ity dia hahafahan'ny mpampiasa vetaveta mpidoroka, indrindra ireo tanora, hahatakatra fa manana olana tena izy izy ireo ary mahazo fitsaboana. Io koa dia hahafahan'ireo manam-pahaizana hanao fikarohana bebe kokoa. Voasakana ny fikarohana sasantsasany satria “tsy tao anaty torolàlana fitiliana ny aretina.” Na “Psychology Today”Gazety psikolojia any Etazonia nefa mamaky misimisy kokoa, dia tsy hamela ireo bilaogera hanoratra momba izany“ satria tsy misy izany. ”
Ireo fanoherana fanoherana ny aretina dia diso toerana. Mila manampy amin'ny fanabeazana ny olona momba izany isika. Ity diagnostika ity dia tsy “hanala tsiny ny biby mpiremby.” Tompon'antoka amin'ny zavatra nataony ireo mpidoroka rehetra. Izany dia mihatra amin'ny heloka bevava mifandraika amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina: ny 'fimamoana' ataon'ny tena dia tsy fiarovana. Ankoatr'izay, mpiremby maro dia TSY mpidoroka akory. Ity dia tranga mampihetsi-po amin'ny tranga roa samy hafa… ka ny pôrnôgrafia dia tsy nambara fa mety ho pathological mihitsy.
Indro misy bilaogy Nanao izany izahay.
Ny Kaomisiona miaro ny zon'olombelona sy ny zon'olombelona dia niantso antso ho an'ny orinasa FTSE100 sy fikambanana maro hafa ho azy ireo handefa ny EHRC ny paikady hampihenana ny fanorisorenana ara-nofo amin'ny ho avy. Ny TRF dia nifandray tamin'ny orinasam-panjakana natolotra fampiofanana fanorisorenana ara-pananahana amin'ny fahazavan'io.
Lehilahy iray voaheloka any Soeda fanolanana zaza amin'ny alàlan'ny Internet. Manampy dikany vaovao amin'ny foto-kevitry ny «mpihaza an-tserasera» ary lafiny iray hafa amin'ny 'loza atrehin'ny olon-tsy fantatra'. Rehefa tsy mihontsina ny ati-dohany noho ny fiovan'ny ati-doha ateraky ny fiankinan-doha, maro ny lehilahy no hitombo ary hikaroka sary vetaveta tsy ara-dalàna toy ny fanolanana zaza tsy ampy taona amin'ny fangatahana. Ahoana no hataon'ny fitsarana? Inona no azontsika atao mba hamerenana ity fironana ity? Tsy manampy ny fandoavana ny olona hijery sary vetaveta. Jereo ny entana voalohany etsy ambony.
Ny famaizana dia mifangaro amin'ny sekoly tsy miankina sy ny fanjakana, indrindra amin'ny taona 12-15. Navoakanay matetika izany rehefa mihazakazaka any an-tsekoly izahay mikasika ny fiantraikan'ny fahasalamana, sosialy sy ara-dalàna amin'ny sexting. Ny tanora dia mila fanohanana betsaka araka izay azo atao any an-trano sy any an-tsekoly momba ny fomba hiatrehana izany trangan-javatra izany. Indreto misy fikarohana vaovao momba ny antony ifaneraserana indrindra amin'ny zazavavy.
"Ny fametahana sy ny fandefasana sary amin'ny fototeny nafafy ary ny halebeazana dia mbola eo an-dalam-pamokarana ny lahateny mifandraika amin'ny adolantsento. Raha ny mpikaroka no nandinika ny vokany amin'ny fifindrana, dia tsy dia fantatra loatra ny olana atrehin'ny adolescents rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ny fandefasana sary. Ny fampiasana ny kaonty manokana an-tserasera navoakan'ny tanora, dia mitantara ireo olana momba ny tovovavy tamin'ny alàlan'ny fandefasana sarimihetsika mitaiza amin'ny namany. Ny famakafakan-kevitra momba ny tantaran'ny 462 dia manambara fa nahazo hafatra mifanohitra ny zatovovavy izay nilaza fa samy handefa sy handefa sary izy ireo. Ankoatra ny fandefasana sary amin'ny fanantenana hahazo fifandraisana, dia nitatitra koa ireo tovovavy fa handefa sary noho ny fanerena ataon'ny lehilahy mpiara-miasa amin'ny endrika fangatahana, hatezerana ary fandrahonana maharitra. Ny zatovovavy dia niezaka ny hivezivezy amin'ny fitondrantenan'ny zatovolahy, saingy matetika dia nanolo-tena izy ireo. Ny fandavana dia matetika natao tamin'ny fangatahana na fandrahonana imbetsaka. Ny tetikady hafa dia tsy teo amin'ny tantaran'ny zatovovavy, izay milaza fa ny zatovovavy dia tsy manana fitaovana handaminana tsara ireo fanamby atrehiny. "
Nanatrika ny fikambanana ho fitsaboana ny fiankinan-doha momba ny fiankinan-doha sy ny fitiliana (ATSAC) tany Londona tamin'ny sabotsy 27 Janoary. Mazava avy amin'ireo mpandray anjara, indrindra fa ny mpitsabo aretin-tsaina sy ny mpanolo-tsaina ny fifandraisana, fa nisy filana lehibe sy faniriana hahazo fanazavana bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto sy ny fitsaboana.
TRF dia faly mandray anjara amin'io filàna io ary manome ny atrikasa RCGP voalohany nahazoan-dàlana momba ny "The Impact of Pornography Internet momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana" any Angletera. Ny atrikasa dia hatao amin'ny volana Mey: 9 May any Edinburgh; 14 Mey any Londona: 16 Mey any Manchester sy 18 Mey any Birmingham. Misokatra ho an'ireo karazan'olom-bolo isan-karazany izy ireo ary mendrika ny sanda CPD 7. Alefaso azafady ny teny. Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa sy ny fanaovana sonia mankany amin'ny www.rewardfoundation.org.
Raha toa ianao tsy mahavita ity tontolon'ny bilaogy niangona avy amin'ny ekipa NoFap ity, dia izao Antony antony hametrahana pôrnôgrafia.
Nanam-potoana be izahay tamin'ny Desambra nampianatra tao amin'ny sekoly 3, Fettes College, George Watson's College ary St Columba, Kilmacolm. Tian'ny mpianatra ny manana fahafahana hiresaka sy hianatra momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto momba ny fahasalamany sy ny mety hisian'ny herisetra. Ny ankizivavy dia maniry ny hahalala bebe kokoa momba ny fifandraisana, tian'ny ankizilahy ny mahafantatra ny fitsipika sy ny fomba handaminana azy ireo.
Ny taona fahenina dia tena liana amin'ny fandrenesana momba ny fifindrana any amin'ny oniversite na oniversite izay tsy dia misy loatra ny manara-maso ny fotoanany sy ny asany. Ny fikarohana dia mampiseho fa na dia hendry aza izy ireo, ny tsy fahafahany mifehy ny fahazaran-tserasera dia mety miteraka vokatra tsy dia tsara loatra, mampihena ny fahatsaran'ny firaisana ara-nofo ary mampihena ny fahalianana amin'ny fifandraisana marina.
Betsaka amin'ireo mandray anjara amin'ny fanatanjahantena Digital Detox 24 ora no mahita fa mitolona izany. Ny sasany gaga amin'ireo mahavita azy - ny ankamaroan'ny mpianatra dia ora vitsivitsy monja no mitantana na tsy manelingelina ny manandrana mihitsy.
Gaga ireo mpampianatra noho ny valin'ny fanadihadiana avy amin'ireo fanontaniana momba ny fampiasana finday sy ny hamaroan'ny alahelon'ireo mpianatra ny fandraisam-peo. Mpianatra maro no milaza fa tsy ampy torimaso izy ireo ary mifandray amin'ny Internet indrindra indrindra amin'ny alina izay mandao azy ireo "mahatsiaro sy reraka" any am-pianarana amin'ny manaraka.
Ireto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitry ny mpianatra:
"Mahasosotra izany, satria nahavita tsara tamin'ny N5 aho nefa sahirana amin'ny avo kokoa"
“Nanjary variana ny 'tsipika' Snapchat, miahy azy ireo bebe kokoa ny olona noho ny zava-drehetra. Tsy ilaina izany ary tena mahaketraka. ”
“Tsy dia mampiasa media sosialy loatra aho, milalao xbox be loatra fotsiny.”
"Mino aho fa nandray fanapahan-kevitra marina ny ray aman-dreniko ka tsy namela ahy handray ny telefaoniko velively miaraka amiko. Midika izany fa tsy voapoizina amin'ny hazavana manga aho ary lasa matory mora foana. Na izany aza dia mbola hitako fa tsy mifidy ny findaiko aho rehefa tsy misy 'zavatra atao'. Hahaliana ny hahita ny vokatry ny Digital Detox. "
“Tena reharehako sy faly aho fa misy miteny amiko amin'ny farany mba hiala amin'ny findaiko. tsy tiako akory ny telefaoniko fa mahatsapa fanerena avy amin'ny namako aho mba ho eo foana… iriko fotsiny fa afaka ny ho mpinamana nefa tsy eo amin'ny telefaonintsika foana ”
Jereo ny tranokalanay mba hianatra bebe kokoa momba anay programa ho an'ny sekoly.
Tahaka ny fampahatsiahivana ho an'ny mpamaky rehetra, ao anatin'ny fifandraisana iray na tsia, misy ny sasany Ny siansa dia lavo amin'ny fitiavana. Tonga ny andro fankalazana ny Valentine's Day 14th Febroary.